Nkuzi nke Android site na ntinye: nweta ihe kacha na ekwentị gị | Gam akporo (Peeji nke 9)
Xiaomi na-ebuputa igwe ndi ozo na gam akporo One
Xiaomi ga-ebuputa igwe ndi ozo na gam akporo One. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ndị China maka iji ụdị gam akporo a na ekwentị ha.
Google Pay ga-enye gị ohere ịgbakwunye nnabata na tiketi
Google Payment ga-enwe nkwado maka tiketi na ịbanye. Choputa ihe banyere ngwa a gha webata n’oge na adighi anya.
Galaxy S7 melite gam akporo Oreo egbu oge ruo mgbe Mee
Akụkọ kacha ọhụrụ na-abịakwute anyị metụtara Galaxy S7 na-egosi na mwepụta nke ụdị ikpeazụ nke gam akporo Oreo na-egbu oge maka otu ọnwa, rue etiti May.
Ngwa kacha mma maka gam akporo
Ihe omume kachasị mma anọ maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a maka ekwentị gam akporo nke ga - enyere gị aka ịmepụta memes nke gị.
Ngwa kachasị mma maka gam akporo
Anọ kacha mma drone ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo. Chọpụta ngwa ndị a ga-aba oke uru maka ndị ọrụ niile nwere mmiri.
Otu esi emegharị mmegharị ngosi na ekwentị na MIUI
Otu esi emegharị ngosigharị na MIUI 9.5. Chọpụta usoro anyị ga - eme iji rụọ ọrụ a na ekwentị Xiaomi na ụdị nke a na-edozi oyi akwa.
Ndụmọdụ iji kpuchido akaụntụ Gmail gị
Ndụmọdụ anọ iji chebe akaụntụ Gmail gị. Chọpụta usoro ndị a iji kpuchido nzuzo na nchekwa nke akaụntụ Gmail gị.
Usoro kachasị mma maka smartwatch gị na Wear gam akporo
Usoro kachasị mma maka nche na gam akporo Wear. Chọpụta usoro aghụghọ maka ndị ọrụ nwere elele na Wear gam akporo. N'ụzọ dị otu a, ị ga - enweta ihe karịa na smartwatch gị.
Egwuregwu kaadị kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu kaadị anọ kacha mma maka gam akporo dị taa. Chọpụta nhọrọ nke egwuregwu kaadị anyị nwere ike ịchọta ugbu a maka gam akporo.
Ndị ọzọ kachasị mma gam akporo Opera VPN
Top ise gam akporo ọzọ ka Opera VPN. Chọpụta ihe banyere ngwa gam akporo ndị a bụ ezigbo nnọchi maka Opera VPN nke ga-emechi ọnụ ụzọ ya na ngwụcha Eprel.
Facebook na-emelite ntọala nzuzo na nhazi ngwa
Facebook na-emelite ntọala nzuzo na ụkpụrụ European ọhụrụ. Chọpụta karịa banyere mgbanwe nke netwọkụ mmekọrịta na-ewebata na ngwa ahụ n'ihi ọbịbịa nke iwu nzuzo ọhụrụ.
Zute Ulefone Power 5, ekwentị nwere nnukwu batrị 13000mAh
Ulefone, ụlọ ọrụ Asia, na-ewetara anyị Ulefone Power 5, nke dị n'etiti etiti gam akporo nwere nnukwu na batrị 13.000mAh dị egwu nke na-ekwe anyị nkwa ọtụtụ ụbọchị iji ya na-enweghị nchegbu gbasara chaja na plọg. Anyị na-ewetara gị ya!
Etu esi tinye gam akporo 8.1 Oreo font na ekwentị gị
Anyị na-egosi gị otu ị ga-esi nweta font Product Sans, font nke na-eji Android 8.1 Oreo, na ngwaọrụ gị yana nkuzi dị mfe ka ị nwee ike ịpụta ọdịdị nke njedebe dị elu na ekwentị gị yana gam akporo 5.x gaa n'ihu. Anyị na-akọwa na ị kwụpụ site na nzọụkwụ!
Esi hazie bọtịnụ gam akporo na ihuenyo n'enweghị mkpa mgbọrọgwụ. [Gam akporo 7.0+]
Ndụmọdụ vidiyo nke m na-egosi gị ngwa ngwa na-enweghị atụ maka gam akporo nke ga-enye anyị ohere ịhazi bọtịnụ gam akporo na ihuenyo ahụ n'enweghị ọdụ mgbọrọgwụ.
Google Pay ruru nbudata nde 100 na Storelọ Ahịa Play
Paymentslọ ọrụ Google na-akwụ ụgwọ electronic, Google Pay, ka karịrị 100 nde nbudata na Storelọ Ahịa Play.
Budata APK nke ihe nchọgharị weebụ nke Lite nke Amazon
Nnukwu e-commerce ibu Amazon, amalitela ihe nchọgharị weebụ Lite ọhụrụ na India, ihe nchọgharị nke ejiri mara oke ọkụ na ngwa ngwa.
Samsung Galaxy A5 2017 malitere ịnata Android Oreo 8.0
Ihe gam akporo gam akporo Oreo echere ogologo oge maka Galaxy A5 2017 amaliteworị ịdị maka nbudata.
Tụ ọhụrụ ụzọ igbachi gam akporo. Nye ya iti !!
Ntuziaka vidiyo nke m na-egosi gị ngwa n'efu maka gam akporo nke ga-enye gị ohere ụdị ọhụụ gam akporo mkpọchi, ụzọ dị nchebe karịa usoro mmeghe, PIN, paswọọdụ ma ọ bụ mkpịsị aka.
Mgbe niile nke Galaxy S9 na gam akporo ọ bụla
Vidiyo nkuzi nke m na-akowa otu esi enweta Always On of the Galaxy S9 na gam akporo obula na uzo di mfe, n’enweghi nsogbu.
Bluboo S3, mkpanaka akụ na ụba na batrị 8500mAh
Anyị na-ewetara gị Bluboo S3, nke njedebe nke njirimara ya niile na nkọwapụta teknụzụ mara ya ọtụtụ ụbọchị ugbu a, nke a ga-adị maka ire ere site na Banggood malite echi, Eprel 18 maka ọnụahịa dị ala karịa 165 euro.
Otu esi emepụta akwụkwọ ahụaja ụdị Edge
Nnọọ vidiyo dị mfe nke m na-akọwa etu esi emepụta akwụkwọ ahụaja iji mee ka ihu igwe Samsung dị
Gam akporo Oreo ruru 4,6% ahịa òkè
Android Oreo nwere 4,6% ahịa òkè. Choputa ihe banyere akuko nkesa gam akporo nke onwa Eprel na egosiputa oganihu nke Oreo na ahia.
Karịrị 3.300 gam akporo ngwa na-akọrọ data site na umuaka achọpụtara
3.300 gam akporo ngwa na-nnyocha banyere umuaka achọpụtara. Chọpụta ihe gbasara ngwa ndị a raara nye inweta na ịkekọrịta data sitere na ụmụntakịrị.
Ekwentị Razer na-amalite imelite gam akporo Oreo
Ekwentị Razer na-amalite imelite gam akporo 8.1 Oreo. Chọpụta karịa maka mmelite ahụ na-amalite ịbata na ekwentị ịgba egwu.
Android P ga-echeta olu nke ngwaọrụ ejikọrọ na Bluetooth ọ bụla
Android P ga-echeta olu nke ngwaọrụ ejikọrọ na Bluetooth. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ a ka ewebata gị mgbe gam akporo P nwetara ahịa na ọnwa ole na ole.
WhatsApp na-enye gị ohere ịrịọ maka ego site na kọntaktị ndị ọzọ
WhatsApp na-ewebata nhọrọ iji rịọ maka ego site na kọntaktị. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ nke ngwa a na-arụ ọrụ na ịkwụ ụgwọ kọntaktị na India.
Etu esi ahazi ma jikwaa eserese ebudatara na Google Maps
Etu esi ahazi eserese sitere na Google Maps. Chọpụta ụzọ anyị ga-esi hazie ma jikwaa eserese anyị na-esite na Google Maps.
Etu esi wụnye Donald Duck Augmented Remo Emoji na Galaxy S9
Anyị nwere ike ịnụ ụtọ AR Emoji nke Donald Duck na Galaxy S9 anyị na Galaxy S9 +. Ọ bụrụ na ịmaghị otu esi etinye ya, n’isiokwu a anyị kọwara otu esi eme ya.
Ngwa kacha mma mgbakọ na mwepụ maka gam akporo
Anọ kacha mma na mgbakọ na mwepụ ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke mgbakọ na mwepụ nke anyị chọtara maka ekwentị gam akporo.
Egwuregwu gam akporo akwadoro maka umuaka
4 gam akporo egwuregwu akwadoghi maka umuaka. Chọpụta nhọrọ a nke egwuregwu gam akporo na-akwadoro maka ụmụaka ma nwee akara ngosi PEGI 18.
Ngwa Apple niile dị na Playlọ Ahịa Play
Ngwa Apple dị maka gam akporo na Storelọ Ahịa Play. Chọpụta ndepụta nke ngwa Apple anyị nwere ike ịchọta dị na Storelọ Ahịa Play.
Ngwa gam akporo kacha mma ịkwụsị ị smokingụ sịga
Anọ kacha mma gam akporo ngwa ịkwụsị ị smokingụ sịga. Chọpụta nhọrọ nke ngwa gam akporo nke na-enye anyị ohere ịkwụsị ise siga.
Esi rụọ ọrụ aka ekpe na gam akporo
Kedu ka ị ga - esi rụọ ọrụ aka ekpe na gam akporo. Chọpụta usoro anyị ga - eme iji rụọ ọrụ aka ekpe na ekwentị anyị.
Android P nwere ike ịnwegharị ngosipụta dịka iPhone X
Android P nwekwara ike ịnwegharị ngosipụta aka. Chọpụta ihe banyere ehi ehi a nke enyegoro gị echiche, a na-echekwa ya na mmelite ahụ ga-enwe njegharị.
O doro anya na ndị kasị mma Facebook Lite ahịa na-arụ ọrụ Messenger
Vidiyo nkuzi nke m na-egosi gị ihe m taa bụ nke kachasị mma Facebook Lite ahịa yana arụ ọrụ zuru oke.
LG ga-enye mmelite ngwa ngwa n'ihi ụlọ ọrụ mmepe ngwanrọ ya
LG mepee oghere mmepe iji melite ngwanrọ ahụ. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ụlọ ọrụ na etiti a nke ha na-achọ iwebata mmelite na ngwanrọ ekwentị.
Google choro ima ihe di iche n’etiti ihe nchebe nke Android na ndi na emeputa ya
Google ga-ewebata mgbanwe na nche nche. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịmebata mgbanwe na nche nche maka ekwentị gam akporo.
Gam akporo Nche: Olee otú iji ọzọ na-echekwa na Play Store n'enweghị
Nkuzi vidiyo bara uru na nchedo gam akporo nke m na-akọwa otu esi eji ụlọ ahịa ndị ọzọ na Playlọ Ahịa Google Play n'enweghị nsogbu ibudata ma wụnye apks.
Zọ kachasị mma iji nweta WhatsApp abụọ n'otu ama
Nkuzi vidiyo nke m na-akuziri gị ka ị buru WhatsApp abụọ n'otu Smartphone ahụ mere ka ọ mekọrịta ọfụma na-enweghị iri nnukwu akụ na gam akporo gị.
(Emelitere) Otu esi eme ka okpukpu abụọ gbanye iji gbanyụọ ihuenyo na gam akporo ọ bụla na-enweghị mgbọrọgwụ
Ihe nkuzi vidio nke m na-egosi gị otu ị ga-esi gbanye okpukpu abụọ iji gbanyụọ ihuenyo na-enweghị mgbọrọgwụ ma ọ bụ soro nkuzi nkuzi adịgboroja.
The Nokia 3 mmelite gam akporo 8.0 Oreo
Nokia 3 na-enweta mmelite ahụ na gam akporo 8.0 Oreo. Chọpụta ihe gbasara imelite ekwentị gị na ụdị sistemụ kachasị ọhụrụ, nke amalitela ịhapụ ya ugbu a.
Etu esi gbanyụọ autoplay vidiyo na YouTube
Gbanyụọ mmegharị akpaka nke vidiyo na ngwa YouTube maka gam akporo bụ usoro dị mfe ma nke anyị ga - ezere iwefu data site na ọnụego anyị enweghị isi.
Esi atụgharị gam akporo na iPhone X
Vidiyo nkuzi nke m na-egosi gị otu esi atụgharị gam akporo na iPhone X, ọ bụ ezie na ọ dị jụụ na anyị agaghị efu Android ebe ọ bụ na ihe a niile bụ naanị n'ọdịdị.
Blackview P10000 Pro: batrị 11.000 mAh na obere oriri
Blackview P10000 Pro: Gaa nyocha ule batrị. Chọpụta ihe banyere ekwentị nke gabigara ule batrị a ma gafere na enweghị nsogbu.
Xiaomi meghere beta zuru ụwa ọnụ nke gam akporo Oreo maka Mi 5, Mi MIX na Mi Note 2
The Xiaomi Mi 5, Mi MIX na Mi Note 2 na-enweta gam akporo Oreo beta. Chọpụta ihe banyere mmemme beta nke mepere emepe maka ekwentị atọ nke akara ndị China.
Ulefone S7 Go ga - egosipụta gam akporo Go (Oreo Edition)
Ulefone S7 Go: Ekwentị ọhụrụ nwere gam akporo Go (Oreo Edition). Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụụ nke ika ndị China nke ga - adaba n'ahịa n'oge na - adịghị anya.
Etu esi wụnye igwefoto Nokia na gam akporo ọ bụla
Vidiyo nkuzi nke m gosiri gị otu esi etinye igwefoto Nokia na gam akporo ọ bụla. Igwefoto Nokia ọhụrụ nwere nhọrọ na-adọrọ mmasị dịka igwefoto abụọ ma ọ bụ ọnọdụ PRO.
Otu esi emepụta ihe mmado ahaziri aha gị n'ụzọ dị mfe
Ezigbo nkuzi vidiyo nke m na-egosi gị ụzọ kachasị mfe ma na-atọ ụtọ iji mepụta akwụkwọ mmado nke gị iji rụọ ọrụ na netwọkụ mmekọrịta gị ma ọ bụ ebe ọ bụla masịrị gị.
Ejiri Smartisan aku 3 nwere nnukwu batrị 4000mAh
Smartisan na-ewetara anyị Smartisan aku 3, ekwentị ọhụụ nke na-abịa nke ọma ma dịkwa gịrịgịrị nke naanị 7.16mm gbara ọkpụrụkpụ, yana nnukwu batrị 4.000mAh nke, na-enweghị mgbagha, ga-enye anyị nnwere onwe dị mma nke ga-eme anyị ichefu plọg na chaja obere oge
Usoro YouTube kachasị mma maka gam akporo
Aghụghọ iji nweta ọtụtụ ihe na YouTube na gam akporo. Chọpụta aghụghọ ndị a nke na-enye gị ohere itinye ngwa a ma ama iji rụọ ọrụ nke ọma.
Ngwa Android ka i scanomi akwụkwọ
Ngwa kacha mma gam akporo iji nyochaa akwụkwọ. Chọpụta ihe gbasara ngwa ndị a nke anyị ga - eji nyocha ngwa ngwa na ekwentị gam akporo anyị.
Ngwaọrụ emelitere na gam akporo Oreo ma dakọtara na Project Treble
Ruo taa, ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ emelitere gam akporo Oreo na dakọtara na Project Treble ka dị obere. Anyị na-egosi gị nke bụ dakọtara ọnụ taa.
Esi ewepu nseta ihuenyo na Samsung Galaxy S9
Esi eweputa nseta ihuenyo na Galaxy S9. Chọpụta ụzọ atọ anyị nwere ike iji nweta nseta ihuenyo na ekwentị dị elu nke Samsung.
Esi gbanwee usoro nke bọtịnụ ndị dị na Galaxy S9
Esi gbanwee usoro nke bọtịnụ na ihuenyo Galaxy S9. Chọpụta ụzọ dị mfe ị ga-esi gbanwee usoro nke bọtịnụ ndị ahụ na ihuenyo elu.
5 gam akporo egwuregwu na-enweghị internet njikọ
5 egwuregwu n'ihi na gam akporo igwe na-enweghị njikọ internetntanetị. Chọpụta nhọrọ a nke egwuregwu maka ekwentị gam akporo na-achọghị njikọ tontanetị iji rụọ ọrụ.
Ngwa kacha mma maka ngwa AMOLED
Akwụkwọ ahụaja ngwa ọdịnala maka AMOLED ntị. Chọpụta nhọrọ a nke ngwa maka gam akporo emere maka ndị ọrụ nwere ekwentị nwere ihuenyo AMOLED.
APP kachasị mma iji jikwaa ngwa
Ọ bụrụ na ị bụ ndị ọrụ nke ịwụnye, iwepu ma ọ bụ ịkekọrịta ọtụtụ ngwa, vidiyo vidiyo m na-ewetara gị taa ga ...
Archos Saphir 50X: Ekwenti ohuru ohuru nwere batrị buru ibu
Archos Saphir 50X: Nkọwapụta, Ahịa na Mwepụta. Choputa ihe banyere igwe ohuru ohuru site na ika French nke n'ere ahia na Europe.
Anyị na-enyocha PlayMX ọhụrụ ahụ nke ọma ma tinye njikọ iji budata ngwa MasDeDe, nke dị ugbu a na Playlọ Ahịa Google.
Vidio vidiyo nke m na-egosi gị ihe nchọgharị weebụ dị egwu, ọsọ ọsọ, ọkụ, yana mgbasa ozi mgbasa ozi na-arụ ọrụ nke ọma yana nhọrọ ndị na-adọrọ mmasị dị ka iwe ihuenyo nke ibe weebụ zuru ezu.
Ngwaọrụ kacha mma elekere kacha akwụ ụgwọ maka gam akporo gị
Na-aza ọtụtụ arịrịọ na-abịakwute anyị site na nkwupụta na netwọkụ mmekọrịta, taa ana m ewetara gị ihe maka m taa bụ wijetị kacha elekere kacha mma maka gam akporo.
Mmelite a na gam akporo Oreo nke Galaxy S7 / S7 Edge, A5 (2017) na A3 (2017) ka a ga-ekesa.
Dabere na asambodo nke S7, A3 na A5 2017 natara, mwepụta nke mmelite na gam akporo Oreo na-aga ịmalite ọrụ.
Kwadoro: Galaxy S6 agaghị enweta gam akporo Oreo
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere obi abụọ ọ bụla banyere atụmatụ nke ụlọ ọrụ Korea iji melite Galaxy S6 na gam akporo Oreo, Samsung kwadoro na ọ gaghị ekwe omume.
Etu ị ga - esi kpuchie ọrụ Edge nke Samsung ọnụ na gam akporo ọ bụla
Vidio vidiyo nke anyị gosipụtara gị otu esi eme ka ọrụ Edge nke ọnụahịa Samsung n'ụdị ọ bụla nke ọnụahịa gam akporo.
Etu esi wụnye ọkwa site na Samsung Galaxy S9 na gam akporo ọ bụla
nkuzi vidiyo nke m na-akọwa otu esi enweta ọkwa nke Samsung Galaxy S9 na gam akporo ọ bụla na-enweghị mkpa ịgbanye ma ọ bụ soro nkuzi nkuzi na-egbu maramara ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya.
Nokia 5 na 6 bidoro ịnata Android Oreo 8.1
N’igosi nkwenye ya na mmelite ngwangwa maka ngwụcha ya, ụlọ ọrụ Nokia eweputala Oreo 8.1 maka Nokia 5 na Nokia 6 2017.
Android Oreo 8.1 na-abịa na Razer Ekwentị na Eprel na-akwado na ọ na-agba gam akporo 8.0
Ọzọkwa anyị na-aga n'ihu ịlele otú mbipute 8.0 nke gam akporo si bụrụ ihe siri ike iji mebie ndị agadi ...
Google Play ga-egosi gị ewu ewu na nke ngwa
Google Play na-egosi ewu ewu nke ngwa ndị ahụ. Chọpụta ihe banyere mgbanwe a nke eruolarịrị na ngwa ngwa ngwa gam akporo, nke gosipụtara anyị ugbu a ka ngwa ndị a ma ama si dị.
Etu esi akwaga ngwa na kaadi SD na Galaxy S9 na S9 Plus
Etu esi akwaga ngwa na kaadi SD nke Galaxy S9 na S9 Plus. Chọpụta usoro anyị ga - eme ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkwaga ngwa na kaadị SD nke Galaxy S9 anyị.
Egwuregwu kachasị mma n'okpuru 25 MB maka gam akporo
Egwuregwu kachasị mma n'okpuru 25 MB maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere nhọrọ a nke egwuregwu ọkụ nke na-ebu obere ma nwee ike ibudata ya na ekwentị gam akporo anyị.
Esi gbanyụọ Bixby na Samsung Galaxy S9
Kedu ka ị ga-esi gbanyụọ Bixby na Samsung Galaxy S9. Chọpụta usoro anyị ga - eso ka onye ọrụ wee kwụsị ọrụ na ekwentị dị elu.
WhatsApp gbanwere ọkwa n'ihi mgbanwe nke nọmba ekwentị
WhatsApp gbanwere ọkwa n'ihi mgbanwe nke nọmba ekwentị. Chọpụta karịa banyere mgbanwe nke ngwa ahụ na-ewebata na ọkwa a nke na-enyekwu ndị ọrụ ohere.
Ngwa kachasị mma kacha mma maka gam akporo
Ihe anọ kachasị mma maka ngwa maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na eserese eserese.
Otu esi zoo ọkwa nke Huawei P20 ma ọ bụ P20 Pro
Etu ị ga - esi zoo ọkwa na Huawei P20 ma ọ bụ P20 Pro. Chọpụta ihe banyere ọrụ na - enye gị ohere zoo ọkwa ahụ na ekwentị ọhụrụ dị elu sitere na Huawei.
MyFitnessunes ngwa e hacked
MyFitnessunes ka hacked, ọ na-atụ aro ka ịgbanwe paswọọdụ. Chọpụta ihe banyere mbanye anataghị ikike na-emetụta ngwa. Ya mere, a na-atụ aro ka ndị ọrụ gbanwee okwuntughe ha na ngwa ahụ ozugbo enwere ike.
Ngwa kachasị mma iji lelee DTT na mkpanaka gị site na nkwado Chromecast. (DTT n'efu, Redio na Pịa)
Ngwa mmetụta uche iji lelee DTT na mkpanaka gị ma ọ bụ zipu ọdịnaya na TV ejikọtara gị site na Chromecast. Ngwa niile dị n'otu ebe ị nwere ike ịlele TV, gee ntị na redio ndị Spain ma soro akụkọ ahụ site n'ịgụ akwụkwọ akụkọ Spanish n'efu.
Yiri OS Onye Mmepụta Preview 1: versiondị ọhụrụ nke Wear OS dị adị ugbu a
Wear os Onye Mmepụta Preview 1 dị ugbu a maka nbudata. Chọpụta karịa ụdị nyocha izizi nke sistemụ arụmọrụ emegharịrị maka Google smartwatches.
ARCore 1.1 na-abịa Samsung Galaxy S9, Huawei P20, Xiaomi Mi Mix 2S na ndị ọzọ
Samsung Galaxy S9, Huawei P20, Xiaomi Mi Mix 2S na-enweta ARCore 1.1. Chọpụta ihe banyere Google Augmented Reality na-abịa na ekwentị ọhụrụ na mmelite ọhụrụ ahụ.
Facebook meziwanye ntọala nzuzo mgbe asịrị
Facebook na-ewebata mmelite na ntọala nzuzo. Chọpụta karịa banyere mgbanwe ndị na-abịa na ntanetị mmekọrịta na-adịghị eme ka ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọkachamara kwenye.
Google Play Movies & TV na-esonye na ọrụ ndị ọzọ gụgharia
Google Play Movies & TV na-esonye na ọrụ ndị ọzọ gụgharia. Chọpụta karịa gbasara mkpebi Google iji jikọta ngwa na ọtụtụ ọrụ gụgharia na United States.
Nweta Nomu S30 mini maka naanị 81.74 Euro, Smartphone na asambodo ndị agha bombproof !!
Ọ bụrụ na ị na-achọ smartphone na-eguzogide ọgwụ na ịtụnanya, tụlee na ọbụlagodi mmiri na ájá nwere asambodo ndị agha, obere Nomu S30 maka naanị 81.74 Euro bụ ọnụ ahịa ị na-achọ na ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri.
Samsung Galaxy Note 9 nwere ike ibu batrị nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 4000mAh
Ihe ngosi 9 Galaxy Note ga - enwe batrị 3.850 mAh. Chọpụta ihe banyere ike batrị nke ika a elu-ọgwụgwụ ekwentị ga-kụrụ na-echekwa na nkera nke abụọ nke afọ.
Chrome 65 na-ewebata mgbanwe na ọnọdụ incognito ya
Google Chrome 65 na ewebata mgbanwe na incognito mode. Chọpụta karịa banyere mgbanwe emere na ọnọdụ incognito na ihe nchọgharị Google.
Google malitere igbochi ọrụ nke ngwa ya na ngwaọrụ ndị a na-akwadoghị
Google amalitela igwu ogbi ma ghara ikwe ka ojiji nke ngwa ya na oru ya na ulo oru a akwadoghi.
Moto Z na-emelite gam akporo 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo na-abịa na Moto Z n'ụdị OTA. Chọpụta karịa maka mmelite nke eze ruru na ụlọ ọrụ siri ike n'ụdị OTA.
Ngwa niile Facebook nwere na android
Ngwa niile nke Facebook nwere maka gam akporo. Chọpụta ngwa niile dị na Storelọ Ahịa Play nke Facebook.
Otu esi egbochi ọnọdụ ụgbọ elu na-arụ ọrụ na akpaghị aka na gam akporo
Otu esi egbochi ọnọdụ ụgbọ elu na gam akporo iji rụọ ọrụ onwe ya. Chọpụta karịa nsogbu a na-emetụta ụfọdụ ndị ọrụ yana ụzọ dị iche iche anyị nwere ike isi dozie ya.
Instagram ga-eji usoro usoro oge ọzọ
Instagram ga-ahazigharị posts na usoro oge. Chọpụta ihe banyere nkwenye nke ngwa ahụ n'onwe ya na nloghachi nke mbipụta n'usoro oge.
Egwuregwu dị egwu maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu atọ dị egwu maka gam akporo. Choputa nhọrọ a nke egwuru-egwu izizi nke ị nwere ike ibudata na ekwentị gam akporo gị. Egwuregwu ndị ahụ dị egwu! dịlarị.
Ndị ọzọ kachasị mma na Fortnite na PUBG maka gam akporo
Ndị ọzọ kachasị mma na Fortnite na PUBG maka gam akporo. Chọpụta egwuregwu ndị a lanarịrịnụ nwere ike ịbụ ụzọ dị mma maka egwuregwu ndị kachasị ewu ewu taa.
Egwuregwu egwuregwu osimiri kachasị mma maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu osimiri anọ kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a na egwuregwu osimiri maka gam akporo. Ha niile nwere ike ibudata ugbu a na Storelọ Ahịa Play.
Kwesịrị ịnweta Ngwa Android maka Studentsmụ akwụkwọ
4 ga-enwerịrị ngwa gam akporo maka ụmụ akwụkwọ. Chọpụta nhọrọ nke ngwa a ga-aba oke uru maka ụmụ akwụkwọ n'ọtụtụ oge. Ha niile nweere onwe ha.
Ntụgharị uche kachasị mma na itinye uche maka gam akporo
4 ntụgharị uche na itinye uche maka ngwa gam akporo. Chọpụta nhọrọ nke ngwa ndị a ga - enyere gị aka iji nwayọ zuru ike.
Onye enyemaka Google enyela gị ohere izipu ego na United States
Google Assistant na-enye gị ohere izipu ego n'etiti ndị ọrụ. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ ewebata na ọkachamara maka ndị ọrụ na United States.
Xiaomi Mi Drop: Ntinye na gam akporo ọ bụla na usoro ojiji
Vidiyo nkuzi nke m na-egosi gị otu esi etinye Xiaomi Mi Drop na gam akporo ọ bụla yana usoro ziri ezi nke iji zipụ ma nata ụdị faịlụ niile na-enweghị eriri.
Etu esi wụnye ngwa ọrụ gọọmentị WhatsApp na Tablet gam akporo gị
Bara uru video nkuzi nke m na-egosi gị otu ị ga-esi wụnye ngwa WhatsApp ngwa na Tablet gam akporo. Ihe a niile na-enweghị mkpa ịbanye na WhatsApp Web ma ọ bụ aghụghọ ọ bụla ma ọ bụ mod.
Nubia V18: Ebe etiti ọhụrụ na nnukwu batrị
Nubia V18: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Chọpụta ihe gbasara ụdị ekwentị ọhụrụ ọhụụ maka ịmalite ọnwa a na China.
Egwuregwu Hilarious na mmepe zuru oke nke anyị ka na-eme ka ahụmịhe PUBG Minecrafrt nwere ihe odide nwere nnukwu akụkụ anọ, akụkụ cubic na ụdị pixelated nke m hụrụ n'anya.
Xiaomi ga-emelite karịa 30 mobiles na MIUI 9.5
Ihe karịrị ekwentị 30 Xiaomi ga-emelite MIUI 9.5. Chọpụta ihe banyere ekwentị ndị China ga-ebuli na ụdị nke a nke onwe gị na izu ndị na-abịanụ.
My Tamagotchi Forever, nke gị Tamagotchi n'ime gam akporo gị
My Tamagotchi Ruo Mgbe Ebighị Ebi bụ ụdị egwuregwu kachasị ọhụrụ nke Bandai Namco maka gam akporo nke na-echeta ma na-agba afọ iri abụọ nke ọmụmụ nke anụ ụlọ na-ewu ewu nke meriri na njedebe 20s.
[APK] Oneplus Weather maka gam akporo ọ bụla
The na-amasị ihu igwe ngwa nke Oneplus Oneplus Weather?. Ọ bụrụ otu a, ị ga - ahụ vidiyo vidiyo a ka m wetara gị ọdụ ụgbọ mmiri zuru oke nke ị nwere ike iwunye Oneplus Weather na gam akporo gị, ọbụlagodi na wijetị arụ ọrụ zuru oke.
Blackview P10000 Pro: 18: 9 ihuenyo na batrị 11.000 mAh
Blackview P10000 Pro: E gosipụtara nkọwapụta izizi. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ ahụ site na akara ndị China nke a ga-ewepụta n'ihu ọha na ụbọchị ole na ole.
[APK] Oneplus Gallery, na Oneplus gallery maka ihe ọ bụla gam akporo
Oneplus osisi ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, Foto osisi nke Oneplus ọnụ ugbu a maka ihe ọ bụla gam akporo ọnụ nlereanya.
Google Play ga-enye gị ohere ịgbanwe mba dị mfe
Google Play ga-eme ka ị gbanwee mba dị mfe karị. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ ewebatala na ngwa ngwa iji gbanwee obodo gị ma ọ bụrụ na ịkwagala na nke ọhụrụ.
Deutsche-Telekom ịkwụsị ịhazi smartphones
Deutsche-Telekom na-aga ịkwụsị ịhazi smartphones. Chọpụta ihe banyere mkpebi nke onye ọrụ German nke na-egosi akara njedebe nke bloatware maka ndị ọrụ.
Etu esi enweta arụmọrụ Memo na gam akporo ọ bụla
Youchọrọ inwe arụmọrụ Memo ngwa ngwa nke njedebe LG na ụdị ọ bụla na ihe atụ nke ọnụahịa gam akporo? Ọ bụrụ otu a, ị nọ n'udo ka anyị na-ewetara gị ngwa ngwa Memo kacha mma n'efu.
Google Play Ozugbo: Gbalịa egwuregwu ahụ n’enweghị nbudata ha
Google Play Instant ga-ahapụ gị ka ị nwaa egwuregwu tupu ibudata ya. Chọpụta ihe banyere atụmatụ Google ọhụụ emere na mmemme na San Francisco.
Koodu nkwado Google Play dị ugbu a na Argentina, Peru na Chile
Mba atọ gara aga nke Google tinyeworo na ndepụta nke mba ndị sitere na ndị mmepe nwere ike ịmepụta koodu nkwado bụ Argentina, Chile na Peru.
Android P nwere ike ọ gaghị ekwe ka agba ochie na-agba ọsọ
Dị ka ụlọ ọrụ injinị ọchụchọ na-ekwupụta, gam akporo P ga-amalite ịhapụ ikwe ka ogbugbu nke ngwa ochie na ngwa ndị ruru Play Store ga-ahaziri maka gam akporo 8.0
Xiaomi Mi 6 sonyere Project Treble
Xiaomi Mi 6 enweworị nkwado Project Treble. Chọpụta karịa ụzọ ekwentị ekwentị ndị China si nweta nkwado maka ọrụ Google a.
A na-emelite MIUI 9 site na nzaghachi ngwa ngwa na nkwupụta ndị otu
Nzaghachi ngwangwa na ịkọkọta ọnụ na-abịakwute MIUI 9. Chọpụtakwuo ụdịrị ụdị ọhụụ nke ekwentị Xiaomi nke na-amalite ịbido n'ụdị ụfọdụ.
Ihe kacha mma 4D na akwụkwọ ahụ aja maka gam akporo gị
, Chọrọ ka gam akporo gị lee anya dị egwu? Ọ dị mma, lee, ewetara m akwụkwọ ahụaja 4D kacha mma n'efu, akwụkwọ ahụaja nwere akụkụ anọ ị ga-ahụ n'anya.
Gam akporo Auto na-akpaghị aka unlocks anyị ama mgbe ejikọrọ
Mmelite kachasị ọhụrụ nke gam akporo Auto, mbipute 2.9, na-enye anyị dị ka isi ihe ọhụụ nwere ike ịmepee ọdụ anyị ozugbo anyị jikọtara ya na ụgbọala anyị.
Aghụghọ iji mata AMOLED ihuenyo
Atọ atọ iji chọpụta ihuenyo AMOLED. Chọpụta ụzọ kachasị mma anyị nwere ike isi jiri taa chọpụta ma ọ bụrụ n’ezie ihuenyo AMOLED.
Ngwa Android maka ekwentị iji gụọ ozi gị
Chọpụta ngwa ndị a maka gam akporo ga-enyere ekwentị gị aka ịgụ ozi gị n'olu dara ụda, yabụ na ị gaghị eme ihe ọ bụla ma ekwentị ahụ ga-agwa gị ihe niile.
Sony na-emelite Xperia XA1, XA1 Plus na XA1 Ultra na gam akporo 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo na-abịa na Sony Xperia XA1, XA1 Plus na XA1 Ultra. Chọpụta ihe banyere mmelite nke na-erute ekwentị nke ika Japanese n'ụdị OTA,
Ngwa Android iji mata osisi
Chọpụta ngwa gam akporo anọ a bara uru ma a bịa n'ịchọpụta ihe ọkụkụ n'ụzọ dị mfe. Ha niile dị maka ibudata na ekwentị gị na Storelọ Ahịa Play.
Ngwa kachasị mma ịmara ihe niile gbasara usoro na fim
Chọpụta ngwa ndị a nke ị ga-enwe ike ịmara mgbe niile banyere ihe niile na-emetụta usoro ọkacha mmasị gị ma ọ bụ ihe nkiri ịchọrọ ịhụ. Easily si gị gam akporo ekwentị.
Usoro EMUI kacha mma maka Huawei na ekwentị Honor
Ise aghụghọ maka EMUI na Huawei na Honor phones. Chọpụta nhọrọ aghụghọ a iji nweta EMUI, akwa mkpuchi nke ekwentị ndị China.
Egwuregwu tennis kachasị mma maka gam akporo
Egwuregwu tennis anọ kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta karịa egwuregwu kacha mma nke egwuregwu a nke anyị nwere ike ịchọta dị na Storelọ Ahịa Play. Yabụ ị ga-enwe egwuregwu tennis kachasị mma gam akporo.
Ihe ngosi 8 nke Galaxy na-amalite imelite gam akporo 8.0 Oreo na Europe
Ihe ngosi 8 Galaxy Note na Europe na-amalite ịnata Android 8.0 Oreo. Chọpụta ihe banyere mbata nke mmelite na igwe ndị dị elu na Europe.
Storelọ Ahịa Play wepụrụ nde 39 dị egwu
E wepụrụ nde mmadụ iri atọ na iteghete dị na Storelọ Ahịa Play. Chọpụta karịa gbasara ọnụ ọgụgụ ekpughere na akụkọ nchekwa Google.
Yiri OS: Android Wey restyling bụ ọrụ
Yiri OS: versiondị ọhụrụ nke gam akporo Wear dị ugbu a. Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụụ nke sistemụ arụmọrụ maka nche elekere nke dị ugbu a na gọọmentị ga-adị n'oge adịghị anya.
[APK] Budata ma wụnye Mpaghara Playerunknown ugbu a. (Usoro OBB)
Lee m hapụrụ gị tupu ọbịbịa ya na Google Play Store, ihe niile ịchọrọ na usoro nwụnye ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ngwa nke Playerunknown's Battlegrounds, egwuregwu ahụ na-eti ya na gam akporo. International version na niile egwuregwu ụdịdị nyeere.
Huawei P10 na P10 Plus melite gam akporo 8.0 Oreo
Gam akporo 8.0 Oreo na eze rutere na Huawei P10 na P10 Plus. Chọpụta ihe banyere mmelite nke na-abịakwute ekwentị abụọ dị elu nke akara ndị China.
Ngwa ndị a bụ ndị na - akpata ọtụtụ batrị na nsogbu arụmọrụ
Ngwa ndị na - ewepụta ọtụtụ arụmọrụ na nsogbu batrị. Chọpụta ndepụta a na ngwa nke na-ewepụta ọtụtụ nsogbu na arụmọrụ na batrị na ekwentị gị. N'ihi otu ihe ọmụmụ Avast
Florence: Egwuregwu ọhụrụ sitere n'aka onye okike nke Ncheta Ndagwurugwu na-abịa gam akporo
Florence: Egwuregwu ọhụrụ sitere n'aka onye okike nke Ncheta Ndagwurugwu dị ugbu a. Chọpụta ihe banyere egwuregwu Ken Wong ọhụrụ na-agbanwe agbanwe na egwuregwu a, akụkọ mmekọrịta na-apụta maka eserese ya.
Etu ị ga - esi mepụta ụlọ nke gugul gị
Nkuzi vidiyo bara uru nke, nke nwere ama ochie ma ọ bụ mbadamba, ụdị nke anyị dina n'ime drọwa na-achịkọta uzuzu, anyị ga-ekepụta Google Home nke aka anyị.
Nwelite foto Google ga-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ na nchịkọta vidiyo
Mmelite Google Photos na-emezi ihe ndezi vidiyo. Chọpụta ihe gbasara mmelite nke na-abịakwute ngwa nke na-ewebata ndozi na nchịkọta akụkọ vidiyo.
Ekwentị dị mkpa ịmalite ịnweta gam akporo Oreo 8.1
Ekwentị dị mkpa ka malitere inweta mmelite gam akporo 8.1 maka njedebe niile, si otú a na-egwu gam akporo gam akporo 8.0 melite
FC Barcelona - Chelsea free ndụ na nke a na-akpali akpali ngwa na-ekiri fim, usoro, tv na football maka free
Ngwa mmetụta uche dị na Playlọ Ahịa Google nke anyị ga-enwe ike ịhụ FC Barcelona - Chelsea n'efu ma dịrị ndụ, nke a na mgbakwunye na inwe ike ịhụ ihe nkiri kachasị mma, usoro n'efu, egwu egwu na n'ezie TV kachasị mma ụwa kwa n'efu.
Atọ iji mee ka Netease rụọrọ gị ọrụ ọzọ !!
Mgbe m kuziri gị otu esi etinye Netease na Spanish na nkuzi ọzọ ma ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ, ugbu a, ewetara m gị aghụghọ a dị egwu nke ị nwere ike iji mee ka Netease rụọ ọrụ ọzọ n'ụzọ dị mfe
The OnePlus 5 na OnePlus 5T na-enweta beta nke gam akporo 8.1 Oreo
Ihe gam akporo 8.1 Oreo beta na-abia OnePlus 5 na OnePlus 5T. Ekwentị abụọ dị elu nke akara ndị China na-amalite imelite na sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ.
[APK] Otu esi etinye Google Markup na gam akporo P
Vidiyo nkuzi nke anyị ji ewetara gị otu esi etinye Google Markup, naanị arụmọrụ gam akporo P nke ị nwere ike ịnwe ugbu a na ọnụahịa gam akporo gị.
Mmetuta free foto nyo ngwa
Vidio vidio nke m nwere ike ịkwado ma kụziere gị otu esi eji ngwa na-enweghị atụ iji tinye nzacha na foto nke oke mma
Google Pay ga - ejikọ ya na kọntaktị iji zipu ego
Google Pay ga - ejikọ ya na ngwa kọntaktị. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ a nke ga - enyere ndị ọrụ aka izipu ego na kọntaktị ha.
Gam akporo Wear gbanwere aha ya wee bụrụ Wear OS
Yiri OS: Android eyi na-adịgide adịgide renamed. Chọpụta ihe banyere aha ọhụrụ nke smartwatch sistemụ nke na-amalite iru ndị ọrụ,
A na-emelite Facebook Messenger ma na-amalite usoro ọhụụ
Facebook Messenger nwere ihe ọhụụ na mmelite ya. Chọpụta karịa maka mmelite nke na-abịa na ngwa izipu ozi nke na-amalite iru ndị ọrụ.
A na-emelite Storelọ Ahịa Play na mgbanwe na igodo
A na-emelite Storelọ Ahịa Play na mgbanwe na igodo. Chọpụta ihe gbasara mmelite ụlọ ahịa ngwa nke na-eme ka usoro ya dị ọkụ.
Ngwaọrụ kacha mma Android maka ọkpụkpọ egwu kachasị amasị gị
New video post nke m na-ewetara gị ihe maka m bụ ihe kachasị mma Android maka egwu egwu gị ma ọ bụ ọrụ egwu egwu. Ihe mgbakwunye zuru oke nke ga - adị oke mkpa na njedebe gị niile.
Ngwa kacha mma gam akporo iji mụọ asụsụ Chinese, Korean ma ọ bụ Japanese
Ngwa 5 gam akporo iji muta Chinese, Korean ma obu Japanese. Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a nke ị ga-eji mụta asụsụ ndị a chọrọ nlebara anya na enyemaka pụrụ iche.
Onye na enyere Google aka na mbadamba nwere gam akporo 5.0 Lollipop
Onye na enyere Google aka na mbadamba nwere gam akporo 5.0 Lollipop. Chọpụta ihe banyere mbata nke onye ọrụ ụlọ ọrụ na mbadamba ndị na-eji ụdị sistemụ arụmọrụ a
Egwuregwu kachasị mma nke kachasị mma maka gam akporo
Egwuregwu kachasị mma nke kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a na egwuregwu kachasị mma ị nwere ike ịchọta n'ime ụdị nke eziokwu gbara ume maka ekwentị gam akporo.
Ngwa Android iji mara ngwa ngwa ụgbọ ala gị na-aga
Ngwa Android iji mara ngwa ngwa ụgbọ ala gị na-aga. Chọpụta karịa gbasara ngwa ndị a ga - agwa gị ọsọ ị na - anya oge ọ bụla ma gbochie gị ịgafe oke ịgba ọsọ.
Usoro kachasị mma maka Playlọ Ahịa Play
Ihe anọ kachasị mma iji rite uru na Storelọ Ahịa Play. Chọpụta usoro aghụghọ ndị a nke na-enyere anyị aka iji ụlọ ahịa ngwa gam akporo gam akporo. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike iritekwu uru na ya ma anyị jiri ya.
Samsung weputara Mmelite Nche mbụ maka Galaxy S9 na S9 +
Mgbe Galaxy S9 na Galaxy S9 + dị naanị n'ahịa maka ụbọchị ole na ole, ụlọ ọrụ Korea ka wepụtara mmelite nche mbụ maka ọnwa Machị.
Ngwa ahụike kacha mma maka gam akporo
Anọ kacha mma mma ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo. Chọpụta nhọrọ a na ngwa mgbatị anọ maka gam akporo nke ga - enyere gị aka ịhazi ma melite ọnọdụ gị na ụdị anụ ahụ n'ụzọ dị mfe.
Usoro Google Chrome kachasị mma maka gam akporo
Usoro Google Chrome kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta usoro aghụghọ ndị a ga - enyere gị aka inweta Google Chrome na ekwentị gam akporo gị. Nwee usoro kachasị mma maka ihe nchọgharị ahụ.
Ngwa Android ka ịtọọ oge posts na Instagram
Ngwa Android ka ịtọọ oge posts na Instagram. Chọpụta karịa gbasara ngwa ndị a ka ịhazi oge ma hazie atụmatụ Instagram. All dị ibudata ugbu a na gị gam akporo ekwentị
HTC U Ultra mmelite na gam akporo 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo na-abata na HTC U Ultra. Chọpụta ihe banyere imelite ekwentị gị na ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google.
Egwuregwu gam akporo na ozi mmekọrịta
Anọ gam akporo egwuregwu na ozi na-elekọta mmadụ nnyocha. Chọpụta ihe banyere egwuregwu ndị a na-achọ ime ka ndị ọrụ mara nsogbu mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Android ga-adị nchebe maka ndị na-eme ihe ike nwoke na nwanyị
Android ga-adị nchebe maka ndị na-eme ihe ike nwoke na nwanyị. Chọpụta ihe banyere echiche nke ụlọ ọrụ dịka BQ na Sony maka gam akporo iji nyere aka kpuchido ndị metụtara ime ihe ike mmekọahụ.
Anyị na-ewetara gị Nubia N3, ekwentị mara mma nwere batrị 5000mAh
Nubia N3 ka gosipụtara na nnukwu batrị nke 5.000 milliamps nke ga-enye anyị nnwere onwe na-enweghị atụ, yana ngosi 6.01 nke anụ ọhịa na usoro 18: 9, yana ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ ga-etinye ya n'ụzọ doro anya na esemokwu nke Ogologo afọ a. Mara ya!
Galaxy A8 March Nche Mmelite Ugbu a Dị
Guysmụ okorobịa nọ na Samsung ka wepụrụ mmelite nche maka ọnwa Machị maka Samsung Galaxy A8 (2018)
Android Oreo nwere ike ịhapụ ụbọchị maka Galaxy Note 8, Galaxy S7, na Galaxy S7 Edge
Dabere na akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na Turkey metụtara Galaxy Note 8 na S7, ụdị ikpeazụ nke gam akporo Oreo ga-abịarute n'oge na-adịghị anya.
[APK] Otu esi ebudata ma wụnye Netease 2018 na-enweghị mgbọrọgwụ. AH na Spanish !!
Vidio vidio nke m na-egosi gị otu esi ebudata ma wụnye Netease 2018 na Spanish na enweghị enweghị mgbọrọgwụ gbanyere mkpọrọgwụ ma ọ bụ soro usoro nkuzi bara uru.
Egosiputara usoro gam akporo P
Oge ekpughere nke gam akporo P Chọpụta ihe banyere oge ikpeazụ nke ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google ga-abata.
Android P agaghị abịa Nexus
Nexus agaghị enweta gam akporo P. Chọpụta ihe banyere mkpebi nke ụlọ ọrụ ahụ ka ọ ghara ịnye ekwentị gam akporo gam akporo P. Thelọ ọrụ America kwadoro itinye uche na Pixels
Facebook Messenger Lite ga-egosi oku vidiyo
Facebook Messenger Lite na-ewebata oku vidiyo. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ ewebatala na ngwa izipu fechaa.
2 Free ọzọ ka Spotify
Video-post nke m na-ewetara gị 2 kacha mma n'efu ọzọ na Spotify, iji dochie ndị na-adịghị arụ ọrụ nke mods dịka Dogfood na ihe ndị yiri ya.
Gam akporo P bụ ugbu a gọọmentị: Mara nkọwa niile
Versiondị mbụ nke gam akporo P dị ebe a: Mara nkọwa ya. Chọpụta ihe banyere ụdị mbụ nke ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ.
Buru ndu onu ogugu Blackberry na gam akporo
Vidiyo nke m gosiri gị otu esi ebi ndụ Blackberry zuru oke na gam akporo site na ịwụnye ngwa ala Blackberry niile, ihe ntanye Blackberry, Ndi ana-akpo, Ozi, BBM, wdg, wdg ...
HOMTOM HT70: Igwe kachasị dị mkpirikpi na batrị 10.000 mAh na ahịa
HOMTOM HT70: batrị mAh 10.000 na ekwentị kachasị njọ. Chọpụta ihe banyere ika ọhụrụ ekwentị na-oru na April.
Energizer Hardcase H570S, ekwentị siri ike nke nwere 18: 9 ihuenyo na batrị 4800mAh
Companylọ ọrụ America bụ Energizer, na-enye Energizer Hardcase H570S, ekwentị mbụ siri ike nke nwere 18-inch nke FullHD + 9: 5.7 na nnukwu batrị 4.800mAh buru ibu. Ebumnuche a na-enweta akwụkwọ IP68, Mediatek MT6739 quad-core SoC, 3GB RAM, na ndị ọzọ.
Ngwa ọzọ dị egwu maka nrụpụta nke Smartphone ma ọ bụ Mbadamba ụrọ anyị
Ebe ọ bụ na ịchọrọ ụdị nke a, taa, ewetara m gị ngwa ọzọ dị ịtụnanya maka nrụpụta nke ọnụahịa gam akporo anyị, ọ bụ Smartphone ma ọ bụ Mbadamba ụrọ a.
Android P ga-enye gị ohere iji mkpanaka gị dị ka keyboard Bluetooth ma ọ bụ òké
Gam akporo P ga-enye gị ohere iji ekwentị dịka igwe Bluetooth. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ na-abịa na ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ.
Ihe mmachi nke March 2018 dị maka Pixel na Nexus
Pixel 2 na Nexus enweworị ihe mgbochi nchekwa Machị. Chọpụta ihe banyere mbata nke ọhụrụ nche patch na ụfọdụ ndozi.
Gam akporo P ga-enye gị ohere igbochi oku site na ndị na-akpọ teleoperators na nọmba amaghị ama
Gam akporo P na-ewebata igbochi oku na ọnụọgụ amaghị. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ na-abịa na gam akporo P.
The OUKITEL WP5000, a jupụtara na nkume smartphone na a 5.000 mAh batrị, IP68 eguzogide na 18: 9 ihuenyo
Ihe ọhụrụ OUKITEL na-eche maka ndị ọrụ kachasị achọ bụ WP5000, ihe atụ nke na-abụghị nanị na-eguzogide ujo, mmiri na ájá na-enweghị ịda mba, kamakwa na-enye anyị batrị 5.000 mAh na ihuenyo 18: 9
Telegram anaghị arụ ọrụ na ọtụtụ Europe
Telegram anaghị arụ ọrụ na ọtụtụ Europe n'ihi nsogbu ndị a na-amaghị ama nke ụlọ ọrụ ahụ na-agba iji kweta na netwọkụ mmekọrịta dịka Twitter
Samsung kwụsịrị ịhapụ mmelite nche maka ụfọdụ njedebe 2016
Companylọ ọrụ Korea bụ Samsung ekwuputala ọdụ nke ga-akwụsị ịnweta mmelite nche yana nke ga-esonye na mmemme nke mmelite nche kwa ọnwa na kwa ọnwa.
Nweta ọtụtụ ihe na Google Keep na aghụghọ ndị a
4 Ndụmọdụ iji nweta ọtụtụ ihe na Google Keep. Chọpụta usoro aghụghọ ndị a ga - enyere gị aka iji ngwa ahụ n'ụzọ kachasị mma.
Ngwa kacha mma gam akporo maka nlekọta nke anụ ụlọ gị
Ngwa kacha mma gam akporo maka nlekọta nke anụ ụlọ gị. Chọpụta ihe banyere nhọrọ a nke ngwa nke ị ga-eji elekọta anụ ụlọ anyị anya.
Egwuregwu egwuregwu kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu kacha mma maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere nhọrọ a nke egwuregwu shooter ị nwere ike ibudata ugbu a na ekwentị gam akporo gị.
Ngwa Kasị Mma gam akporo iji Hazie Foto Osisi
Ngwa gam akporo kacha mma iji hazie foto gallery gị. Chọpụta nhọrọ a na ngwa kacha mma n'ime ụdị ya.
Egwuregwu egwuregwu kachasị mma maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere egwuregwu ndị a dị egwu ị nwere ike ibudata ugbu a na ekwentị gam akporo gị.
Esi lelee nche nke WiFi gị ma mara ngwaọrụ ndị ejikọrọ
Ngwa dị mfe nke anyị ga-enwe ike ịlele nchebe nke netwọk Wi-Fi anyị, nke ngwaọrụ jikọọ yana enweghị ike ha, ọbụlagodi ịntanetị nke ihe.
Egwuregwu egwuregwu ịnyịnya kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu ịnyịnya kacha mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ nke egwuregwu ịnyịnya ise maka gam akporo anyị nwere ike ibudata ugbu a na ekwentị anyị.
Ndị na-esote Nubia smartphones ga-abata na gam akporo dị ọcha
Ndị na-esote Nubia smartphones ga-abata na gam akporo dị ọcha. Chọpụta ihe banyere mkpebi nke ụlọ ọrụ China maka iji ụdị sistemụ arụmọrụ a.
Ndị na-agụ PDF kacha mma maka gam akporo
Ihe ise PDF kacha mma maka gam akporo dị ugbu a. Chọpụta nhọrọ a site na iji PDF kachasị mma anyị nwere ike ibudata ugbu a na gam akporo.
Ngwa kachasị mma ịgbaso ọnụahịa nke cryptocurrencies
Ngwa kachasị mma ịgbaso ọnụahịa nke cryptocurrencies. Chọpụta ngwa ndị a nke ị nwere ike ịgbaso ọnụahịa nke cryptocurrencies n'oge niile.
Ihe nchọgharị Opera ahụgharịgharịrị ọsọ ọsọ karịa Chrome
Taa, m na-ewetara gị ụdị vidiyo a na-atụnyere, ihe atụ na ihe ngosi nke m na-egosi gị etu ihe nchọgharị Opera Weebụ ọhụrụ si dị ngwa karịa Google Chrome. Ngwanu, nye ya ntutu ya !!!
Ngwa ndị na-abụghị ihe ha yiri, taa bụ redio kacha njọ n'ụwa
Anyị na-eweghachi na ngalaba nke ngwa ndị ahụ dị ka ha dị anyị, oge a na ụda dị mma ebe ọ bụ na m ga-eweta ma kwado ngwa a na-akpọ redio kacha njọ n'ụwa. Ngwa nke ị ga-ahụ n'anya.
The Honor 7X na-enweta beta nke gam akporo 8.0 Oreo na Spain
Ihe gam akporo 8.0 Oreo beta ruru Honor 7X na Spain. Chọpụta karịa maka mmalite nke mmemme beta maka ndị ọrụ nwere etiti nke akara ndị China.
Nwere ike ịdebanye aha ugbu a maka Harry Potter: Hogwarts Mystery
Ndenye aha maka Harry Potter: Hogwarts Mystery ka mepere. Chọpụta ihe banyere mmeghe nke ndebanye aha nke egwuregwu a ma ama na usoro.
Mmelite nche February maka Galaxy S8 na S8 + dị ugbu a
Mmelite nchedo maka ọnwa nke February maka Galaxy S8 na S8 + dị ugbu a maka nbudata site na njedebe kwekọrọ.
Naanị ụdị abụọ gam akporo na-enye ezigbo nkwado nchedo
Naanị ụdị abụọ gam akporo na-enye nkwado nchekwa dị mma. Chọpụta karịa gbasara akụkọ nche a nke gosipụtara nsogbu na gam akporo.
Budata ngwa sitere na Twitter na arụmọrụ iji chekwaa ihe ị ga - ahụ ma emechaa
Ibudata ma wụnye ngwa Twitter na arụmọrụ iji chekwaa ihe iji lelee mgbe e mesịrị, ọrụ ọhụrụ nke na-abanyebeghị na mbipute ị nwere ike ibudata na Storelọ Ahịa Play.
Gam akporo P ga-enwe nwa afọ nkwado maka iris nyocha dị ka ụzọ nke akpọchi
Gam akporo P ga-enwe nwa afọ nkwado maka iris nyocha. Chọpụta ihe banyere ọbịbịa nke iris nyocha na ngwaọrụ gam akporo P n'afọ a.
Hangouts Chat: Ngwa izi ozi ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ndị dịbu na Storelọ Ahịa Play
Hangouts Chat: Ngwa izi ozi maka ụlọ ọrụ. Chọọ karịa gbasara ngwa Google a dị adị na Storelọ Ahịa Play.
ASUS Zenfone Max M1: ASUS ohuru nwere nnukwu batrị ekpughere na MWC
ASUS Zenfone Max M1: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Chọpụta ihe maka ekwentị ọhụrụ ASUS ewepụtara na MWC 2018.
Versionwa zuru ụwa ọnụ nke Xiaomi Mi 6 na-amalite imelite gam akporo 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo ruru nsụgharị zuru ụwa ọnụ nke Xiaomi Mi 6. Chọpụta ihe banyere mmelite nke ekwentị dị elu nke akara ndị China.
Ndụ batrị nke Galaxy S8 na S8 + dị nnọọ ka nke Galaxy S9 na S9 +
Onu ogugu onu ogugu batrị ndi Galaxy S9 na Galaxy S9 nyere di ka ndi nke bu ya uzo, ma e wezụga oriri batrị mgbe ha na-egwu egwu.
Chọpụta ekwentị gam akporo Go gosipụtara na MWC 2018
E gosipụtara gam akporo gam akporo Go na MWC 2018. Chọpụta ihe banyere ekwentị na-eji ụdị ọkụ nke sistemụ arụmọrụ gosipụtara na mmemme a ma ama.
Bọọlụ Dragọn. nke kacha mma na akwụkwọ ahụ aja, ụdaolu, na-atọ ọchị na ndị ọzọ
Vidiyo nke m na-egosi gị otu esi ebudata akwụkwọ ahụaja dị elu nke usoro Dragon Ball, nke ọma, akwụkwọ ahụaja, ụdaolu na ọkwa ma ọ bụ mkpu, ihe ọchị, ihe nkiri, wdg, wdg.
Zute Energizer Hardcase H590S, ekwentị nwere batrị 5800mAh
Firmlọ ọrụ French Avenir Telecom, ekwuputala Energizer Hardcase H590S, smartphone nwere njirimara na nkọwapụta teknụzụ kwesiri ka etiti na batrị, ọ nweghị ihe ọ bụla na obere, 5.800mAh. Mara ya!
Samsung kwadoro nkwado Treble maka Galaxy S9 na S9 +
Samsung Galaxy S9 na S9 + nwere nkwado Treble. Chọpụta ihe banyere nkwenye site na ụlọ ọrụ iji kwado ọrụ a.
Nokia 3 na-anata Android 8.0 Oreo na beta ụdị
Android 8.0 Oreo na-abịa Nokia 3 n'ụdị beta. Chọpụta ihe gbasara mmelite nke na-abịa na ekwentị nke ika ahụ bụ nke ikpeazụ iji melite.
Ndị a bụ ekwentị gam akporo Otu gosipụtara na MWC 2018. Mụtakwuo maka ekwentị ndị ewepụtara na mmemme a na sistemụ arụmọrụ a.
Vidio edere na MWC18 nke m na-egosi gị otu ọhụụ emojis ọhụrụ nke Samsung Galaxy S9 na Samsung Galaxy S9 Plus ọrụ
Gam akporo P ga-emesị nyefee isiokwu gbara ọchịchịrị maka ụdị ihuenyo OLED
Dị ọzọ nke gam akporo, gam akporo P, ga-agbakwunye isiokwu gbara ọchịchịrị iji belata oriri batrị nke ọnụ na ụdị OLED.
Ngwa kacha mma yoga maka gam akporo
Ngwa kacha mma yoga maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a site na iji ngwa kacha mma dị na ịme yoga n'ụlọ.
Egwuregwu kachasị mma na egwuregwu ihe omimi maka gam akporo
Egwuregwu kachasị mma na egwuregwu ihe omimi maka gam akporo. Choputa nhọrọ a na oke mpụ na egwuregwu omimi dị ugbu a.
Ihe ndi ozo di nma banyere Swype maka gam akporo
Ihe ndi ozo di nma banyere Swype maka gam akporo. Chọpụta isi ihe ise a nwere ike dochie ngwa ngwa Swype a rụchara.
Ngwa nri kacha mma maka gam akporo
Ngwa nri kacha mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a site na iji ngwa nhazi maka ụtọ niile adịlarị ibudata na ekwentị gị.
Ngwa kachasị mma iji mụta ịbụ abụ na gam akporo
Ngwa kachasị mma iji mụta ịbụ abụ na gam akporo. Chọpụta ihe gbasara ngwa dịnụ iji mụta usoro ma kpoo olu gị.
Egwuregwu egwuregwu egwuregwu kachasị mma maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu egwuregwu kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a na egwuregwu maka gam akporo nke na-enye anyị nhọrọ nke iji ọtụtụ egwuregwu.
Ngwa ịchịkwa iji gị mobile
4 Ngwa ijikwa ihe ị na-eji ekwentị gị eme. Chọpụta ngwa ndị a na-enyere gị aka izere ịbụ ndị ekwentị riri ahụ ma jiri ọrụ eme ihe.
Igwe gam akporo gam akporo izizi ga amalite na MWC 2018
Akpa gam akporo Go smartphones ga-abata na MWC 2018. Chọpụta ihe banyere ozi ọma Google kwupụtara banyere ụdị ọkụ nke sistemụ arụmọrụ.
Ike Ike Max P16K Pro, mkpanaka nwere batrị 16000mAh nke a ga-ewepụta na MWC na Barcelona
Zute Energizer Power Max P16K Pro, nke mkpanaka nke onye nrụpụta na-arụghị aka ya, nke ahụ bụ na, dị ka ụlọ ọrụ eletriki eletrik si kwuo, P16K kwere nkwa ruo ihe karịrị otu izu na nkezi iji anyi emeghi anyi gha echegbuo banyere plọg. Anyị na-agbasawanye gị!
Ngwa nke ga - eme ka Android gị rụpụta ọtụtụ ihe. Ugbu a n'efu maka otu ụbọchị naanị !!
Vidiyo nke m gosipụtara gị na ngwa nke ga - eme ka gam akporo gị rụpụta ọtụtụ ihe, ngwa nke ugbu a maka awa ole na ole ị ga - enwe ike ibudata ụdị akwụ ụgwọ n'efu.
Samsung maliteghachi gam akporo Oreo melite maka Galaxy S8
Daysbọchị 8 mgbe emegharịrị mmelite maka Galaxy S8 sitere na gam akporo Oreo, ụlọ ọrụ Korea ewepụtala ụdị ikpeazụ ọhụụ na nsogbu nke reboots edozi.
Lọ Ọgwụ Uche: Eastern Bloc 2, egwuregwu egwu dị n'ụdị Silent Hill n'efu maka obere oge
Ọ bụrụ na-amasị gị egwuregwu egwu maka gam akporo na nke kachasị ọcha Silent Hill, gbaa ọsọ iji budata entallọ Ọgwụ Uche: Eastern Bloc 2 kemgbe ugbu a na obere oge anyị nwere ike ịnweta ya n'efu.
3D Sourround Music Player, ọ bara uru ịkwụ ụgwọ ihe ruru euro 11 maka ngwa?
Nyocha nke ihe ọkpụkpọ egwu maka Android 3D Sourround Music Player, onye ọkpụkpọ anyị nwere ike ịnwale n'efu maka ụbọchị 15 ma ọ ga-efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 11 Euro. Mana ọ bara uru ịkwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Euro 11?
Android P ga-egbochi ịnweta igwe na ngwa ọdịnala
Android P ga-egbochi ịnweta igwe na ngwa ọdịnala. Chọpụta karịa gbasara sistemụ arụmọrụ ọhụụ na-achọ ichedo nzuzo onye ọrụ.
Samsung Galaxy Note 8 ga-achọ imelite ya gam akporo 8.0 Oreo dị ka WiFi Alliance
Ihe ngosi Samsung Galaxy 8 ga - enweta Android 8.0 Oreo dị ka data leaked si WiFi Alliance nke ụdị aha ngwaọrụ a gosipụtara na ụdị sistemụ arụmọrụ a. Anyị na-agwa gị nkọwa!
Android P ga-egbochi ịnweta igwefoto na ngwa nzụlite
Android P ga-egbochi ịnweta igwefoto na ngwa nzụlite. Chọpụta ihe banyere njirimara ọhụrụ na-abịa na sistemụ arụmọrụ.
Otu esi eziga WhatsApp na-enweghị ịchekwa kọntaktị
Ntụziaka dị mfe nke m na-egosi gị otu esi eziga WhatsApp na-enweghị ịchekwa kọntaktị na atụmatụ nke anyị, naanị ịmara nọmba ekwentị nke onye anyị chọrọ ịgwa
Uzo esi emeputa ulo oru gam akporo. (Wayszọ dị iche iche ọbụlagodi ọnụahịa ahụ anaghị agbanye)
Bara Uru Android video nkuzi nke m na-egosi gị otú iji tọgharịa gam akporo na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụzọ dị iche iche, si dị iche iche ụdị nke ọnụ dị iche iche n'ígwé nke customization na si Recovery bụrụ na gị gam akporo anaghị agbanwu.
Egwuregwu kachasị mma na-adịghị agwụ agwụ maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu anọ kachasị mma na-agba ọsọ maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ nke egwuregwu nke ụdị a anyị nwere ike ibudata ugbu a na ngwaọrụ gam akporo.
Egwuregwu kachasị mma maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu anọ kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a na egwuregwu kachasị mma anyị nwere ike ịchọta n'ime ụdị a maka ngwaọrụ gam akporo.
Kacha mma virtual eziokwu ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo
Ihe anọ kachasị mma nke eziokwu maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a na-eji eziokwu eme ihe na gam akporo.
Ngwa kachasị agụmakwụkwọ maka ụmụaka na gam akporo
Ngwa kachasị agụmakwụkwọ maka ụmụaka na gam akporo. Chọpụta nhọrọ a site na iji ngwa ise na-enyere ụmụaka aka ịmụ ihe.
Ihe ndị a bụ ngwa iri na itoolu na-egwu Bitcoin na gam akporo na-enweghị ikike anyị
Companylọ ọrụ nchebe Sophos ebipụtala akụkọ ọ na-egosi anyị ngwa 19 dị na Storelọ Ahịa Play na nke mere ka ndị mmepe nwee ike ịnweta cryptocurrencies na-enweghị nkwenye ha.
A gam akporo ngwa naghachi ehichapụ faịlụ
Ngwaọrụ gam akporo kacha mma iji weghachite faịlụ ehichapụ. Chọpụta ihe gbasara nhọrọ a nke ngwa anyị nwere ike ịchọta iji weghachite faịlụ ehichapụ na gam akporo.
Ise Atụmatụ na-eme ka gị gam akporo ekwentị-adịru ogologo
Ndụmọdụ maka ekwentị gam akporo anyị ka ọ dị ogologo. Chọpụta usoro usoro a iji mee ka ngwaọrụ anyị rụọ ọrụ nke ọma karịa.
Anọ egwuregwu kacha mma dị na gam akporo. Chọpụta nhọrọ a na egwuregwu kachasị mma n'ime ụdị echiche ị nwere ike ibudata na gam akporo.
Samsung na-agwa maka ihe kpatara iwepu Oreo melite maka Galaxy S8
Nwepu nke gam akporo Oreo maka Galaxy S8 bụ n'ihi ịmalitegharị nke ngwaọrụ ebe arụnyere ya.
Ngwa iji lelee TV na gam akporo
Ise ngwa na-ekiri TV na gam akporo. Chọpụta ngwa ise a anyị nwere ike iji lee igwe onyonyo na ekwentị gam akporo anyị.
Google na-ekwuwapụta, ọzọ, nke ngwaọrụ emelitere na gam akporo Oreo na nke ga-eme n'oge na-adịghị anya
Ọhụrụ melite nke gam akporo sistemụ maka smartwatches ga-erute 5 ngwaọrụ ọhụrụ, dịka ndepụta nke Google ka emelitere na weebụsaịtị ya.
Ihe ohuru ohuru banyere Xiaomi Mi Mix 2S bia ... O bu ezigbo!
Anyị amataworị ihe gbasara Xiaomi Mi Mix 2S, nke ga-abịa na isi ihe asatọ Qualcomm Snapdragon 845 processor, 8GB nke RAM, 256GB nke ROM, yana atụmatụ ndị ọzọ ga - eme ka ọ bụrụ onye asọmpi siri ike na gam akporo dị elu. Mana nke kachasị mma bụ na ọ dị adị! Anyị na-agbasawanye gị!
NOMU S50 Series: Akuko mbu ejiri buru ibu na 18: 9 ihuenyo na gam akporo 8.1 Oreo
NOMU S50 Series: Akuko mbu ejiri buru ibu na 18: 9 ihuenyo na gam akporo 8.1 Oreo. Chọpụta karịa maka akara ọhụrụ nke ika ga-abata na MWC 2018.
Icheta gam akporo: Music Player 3 [APK]
Anyị na-alaghachi n'oge iji wetara gị ọkpọ egwu 3 na ngwa ngwa, nke bụ otu n'ime ngwa kachasị mma na egwu egwu egwu kachasị egwu maka gam akporo n'oge ya.
Ọ dịghị ihe App: The ngwa na-eme ihe ọ bụla na nwere ugbua ihe karịrị 1 nde downloads
Ọ dịghị ihe App: The ngwa nke na-eme ihe ọ bụla na nwere ugbua ihe karịrị 1 nde downloads. Choputa ihe banyere ngwa a ichoro di egwu na Storelọ Ahịa .lọ Ahịa.
Samsung na-akwụsị imelite gam akporo Oreo maka Galaxy S8 na S8 +
Samsung na-akwụsị imelite gam akporo Oreo maka Galaxy S8 na S8 +. Chọpụta karịa gbasara mkpebi a manyere ụlọ ọrụ Korea ime.
Ọtụtụ nde ekwentị gam akporo na-ebute ọrịa m cryptocurrencies
A na-eji nde ekwentị eji arụ ọrụ ego igwe na-amaghị ama. Chọrọ ịma ka esi echebe onwe gị?
[APK] Etu ị ga - esi nweta ndị emulators niile na egwuregwu n’efu na gam akporo gị
Baa Uru video nkuzi nke m na-egosi gị otú ị nwere niile emulators na egwuregwu n'ihi na free enwe na gị gam akporo ọnụ.
Versiondị ọzọ nke Foto Google agaghịzi akwado jelii agwa
Nwelite na-esote na Foto Google agaghịzi adaba na gam akporo jelii agwa, mana ọ gaghị akwụsị ịrụ ọrụ na ngwaọrụ ochie, dịka ụdị nke gara aga. ga-anọgide na-adị.
Nokia 8 na-emelite gam akporo 8.1 Oreo
Android 8.1 na eze bịarutere Nokia 8. Chọpụta ihe maka mmelite nke dị ugbu a maka ndị ọrụ na ekwentị ika.
Ngwa kacha mma iji mee ka ndị mmekọ gị nwee mmemme Valentpo
Ọ bụghị naanị na ugbu a bụ inepo Day, ebe anyị nwere ike inye ngwa anyị na onye anyị na ezinụlọ site na akaụntụ Google na-enye anyị.
Etu ị ga - esi mee ekele n’ụbọchị Valentine n’efu
Video nkuzi nzọụkwụ nke m na-akụziri gị ka ike inepo ingsbọchị ekele maka n'efu na n'ụzọ zuru oke mbụ
Gam akporo P ga-dakọtara na ọnụ na notch
Dị ọzọ nke gam akporo P ga-emesị nye nkwado maka ọkwa ahụ yiri ka ọ ghọọ ihe ama ama n'etiti ndị nrụpụta gam akporo.